I-loft enhle eseduze ne-St. Emilion - I-Airbnb
I-loft enhle eseduze ne-St. Emilion
Bellefond, Aquitaine, i-France
I-JACUZZI EKHETHEKILE - Ibhodlela le-Champagne kanye ne-JACUZZI YASEMBULWENI ikulindile kukho konke ukubhuka kobusuku obungu-2 noma ngaphezulu uthele uJANUARY kanye noFEBRUARY 2018
IZIKHOSI ZOKUPHEKA NSUKU ZONKE - Bona imininingwane ngezansi.
Kubantu abadala abangu-2 kanye nezingane ezimbalwa ngaphandle kwezindleko ezengeziwe, ngaphandle uma izingane nazo zidinga isidlo sasekuseni - Umbhede omkhulu owodwa ophindwe kabili phezulu, kanye nombhede osofa ogoqekayo phansi, lapho izingane zingalala khona. Ngiphinde ngaba nabantu abadala abengeziwe abalala kusofa embhedeni ophansi ukuze bathole inkokhiso encane eyengeziwe yelineni njll, thintana nami.
Ubhasikidi wamahhala wasekuseni njalo ekuseni onezikhwama zekhofi nezetiye, ijusi yewolintshi entsha, ubisi, ibhotela, ujamu kanye nokukhetha kwakho i-croissant noma i-chocolate croissant yomuntu ngamunye kanye ne-bread baguette. Qaphela ukuthi isidlo sasekuseni sifakiwe ukuze uhlale okungenani ubusuku obu-2, futhi asifakiwe uma izaphulelo ezikhethekile zikhona.
Isakhiwo sewayini esibuyiselwe kahle esinomlando wekhulu le-17 nendawo engamahektha ayi-1.5. Ifulethi elizimele ngokuphelele futhi eliziqukayo lohlobo lwe-loft elinekamelo lokulala phezulu kanye nombhede omncane osofa esitezi esingezansi (120cm x 195cm). Imishayo eveziwe yasekuqaleni nezindonga ze-sandstone. Leli yindlu yesi-2 kwangu-3 eziqukethwe ngokwazo kule ndawo, eyimfihlo ngokuphelele komunye nomunye. Amaminithi ukusuka edolobhaneni elisezingeni le-Unesco i-St. Emilion eliqhele ngamakhilomitha angu-13, kanye nemizuzu engu-40 ukusuka edolobheni elihle lase-Bordeaux. Izungezwe ngokuphelele izivini ze-Entre-Deux-Mer, ezibomvu nezimhlophe, nenqwaba yezivini zokuzivakashela, noma ukuyonambitha iwayini. Konke ukunethezeka kwesimanjemanje, kanye nomzila wamabhayisikili ongamamitha angu-500 okuholela kuwe ku-100 kms wemizila uvuma amadolobhana namaphandle aseGironde. Kukhona ngisho nesivini ongasifinyelela kalula ngomzila wamabhayisikili e-Espiet, ungaphuzi kakhulu. ukugibela ibhayisikili emuva! Ichibi lokubhukuda, i-sauna ne-jacuzzi. (I-Jacuzzi ne-sauna zizobhukhwa kusenesikhathi njengoba zingatholakali unyaka wonke). Ibhulakufesi lifakiwe uma uqashwa ngenani elingu-FULL PRICE ngobusuku, ngaphandle kwalokho ngenani langeviki ubhasikidi wokwamukela uhlinzekwa ngewayini kanye nemikhiqizo yasendaweni. Ezikhathini ezinamanani akhethekile, ibhulakufesi liyimali ongayikhetha, ama-euro ayi-6 ngomuntu ngamunye. Ikhishi lihlome ngokuphelele.
Imininingwane Esebenzayo................................................ ............................
° Umshini wokuwasha
° Umshini Wekhofi (NESPRESSO)
° Umshini Wekhofi (isitayela se-plunger, samaqabunga etiye nawo)
° Ibhodi loku-ayina elincane
° Ishawa yesitayela saseMelika enekhanda elikhulu leshawa ukuze uthole ishawa enhle!)
° Futhi ishawa yesitayela saseYurophu esitezi esiphezulu nekhanda leshawa eliphethwe ngesandla
° I-TV enesidlali seDVD esakhelwe ngaphakathi
° Isistimu ye-stereo enembobo ye-IPHONE futhi engakwazi ukufunda namakhadi
° Ukufinyelela kwe-WIFI endlini (mahhala)
- Okungenani abantu abangu-3 kanye no-8, izifundo zokupheka ze-DAILY nompheki wasendaweni osezingeni eliphezulu.
Isibonelo sosuku olujwayelekile
9h30 (ngemuva kokudla kwakho kwasekuseni okuphakelwe endlini yakho) phuma uye emakethe yendawo ukuyolanda izinto zokudla kwasemini nedina. Amathiphu okuthenga umkhiqizo wendawo. Ikhofi esigcawini semakethe.
I-11h Buyela endlini ukuze ulungise ukudla kwasemini, okufana ne-papillotes de veau, i-piperade basque, i-lasagne au i-salmon, ilandelwa i-Tarte Tatin, i-Clafoutis njll.
12h30 kuya ku-14h - Isidlo sasemini ndawonye etafuleni lomndeni nidla ukudla okulungisiwe.
14h - 16h - Isikhathi sangasese, kungaba yi-sieste egunjini lakho, ukugibela ibhayisikili endleleni yebhayisikili, i-sauna noma i-jacuzzi.
16h - 18h30 - Isifundo sokupheka, ukulungiselela isidlo sakusihlwa, njenge-Blanquette de veau, Magret de Canard - uhlu alupheli, kanye nophudingi, ama-macarons, cannelles Bordeaux.
19h -> Jabulela ukudla kwakho endlini yakho noma etafuleni lomndeni. Iwayini lifakiwe.
IZINDLEKO - ama-euro ayi-150 umuntu ngamunye ngosuku okuhlanganisa AMAHORA angu-6 okufundisa ukupheka, IMINININGWANE + Iwayini, ISIDLA + Iwayini. Ukuthutha ukuya nokubuya eMakethe yabalimi noma kwenye indawo ovakashelwa kuyo.
Amamenyu Abanzi lapho kudingeka, futhi ukuvakasha kwemakethe kungashintshwa kube ukuvakasha kwe-Chateaux ntambama ukuze uthole isifundo sokubonga iwayini. Uma unentshisekelo futhi abantu abangaphansi kwaba-3 eqenjini lakho ungazise njengoba singase sibe nabanye abahlala benentshisekelo enkulu ngesikhathi esifanayo ukwenza ubuncane bemfuneko yomthamo.
Imininingwane yesidlo sasekuseni sokuhlala ngaphansi kweviki.
Kukhona umshini wekhofi we-Nespresso egumbini. Njalo ekuseni ngikulethela i-croissant neshokoledi okusanda kuphekwa futhi kwalethwa umbhaki wendawo njalo ekuseni kanye nesinkwa somuntu ngamunye, ukudla kwasekuseni okujwayelekile kwesi-french, kanye nejusi yewolintshi, ibhotela nojamu. Ngivame ukuletha ithreyi futhi ngilishiye ngaphandle komnyango wakho wangaphambili ngabo-8h00 noma 8h30, ungazise uma ulidinga ngaphambi kwalokho.
** Ngingeza ngizokulanda esikhumulweni sezindiza noma esiteshini sesitimela ngemali ekhokhwayo, ingxenye yaleyo yetekisi
** Ngokunjalo, uma uza ungenayo imoto (okungenzeka njengoba kunesitolo esincane esihamba ibanga elide futhi sinamabhayisikili okuvakasha) ngiyajabula ukukuyisa esitolo esikhulu sendawo lapho ngiya mahhala.
** Emaqenjini amakhulu nginemoto ehlala abantu abangu-7 ongayiqasha nsuku zonke noma uhhafu nsuku zonke.
**Ngibuze ngemigede, ngaphansi kwesigodi sakithi, ngingakuthatha ngikuvakashele uma uthanda....
** Isidlo Sosuku singahlelwa, kuphakelwe ekamelweni lakho noma etafuleni lomndeni, rosiwe inkukhu ephakelwe okusanhlamvu engu-2kg nemifino emisha kanye nama-french athosiwe angcono kakhulu asekhaya endaweni, isitsha sikashizi, ikhofi namabhisikidi asanda kubhakwa, kanye lonke iwayini ongaliphuza... - lonke likhiqizwa endaweni eyi-5 km futhi lilisha ngosuku. Isibonelo esisodwa nje sokudla kwansuku zonke. Kudingeka sazi amahora angu-24 kusengaphambili. Intengo kusuka ku-15 kuya ku-20 euros ngomuntu ngamunye, kufaka phakathi lonke iwayini ongaliphuza!
** Kubathandi bomlando nabemivubukulo, isifunda esidala kakhulu, isonto lendawo liyikhulu le-10 kodwa lidala kakhulu kunalokho, kutholakale izinhlamvu zemali zegolide lamaRoma endaweni yethu, futhi ngamamitha nje ukusuka eRomagne, umlimi olima umhlabathi wakhe ukuze atshale. izivini zawela ophahleni lwesakhiwo esidala, lapho umphakathi wemivubukulo ufika ukuzophenya (isibopho esingokomthetho) wagubha incithakalo yamaRoma. Sebeqedile, umlimi waligcwalisa futhi ukuze atshale imivini yakhe - iwayini lingcwele....! Umakhelwane wethu unomthombo othi phakathi nendawo phansi unomhubhe oholela ndawana thize - osazophenywa... Izivakashi zangaphambili ziqinisekile ukuthi zithole izimpawu zamaqhawe e-cathar emgwaqeni onamadwala okhuphukela esigodini esikhulu ukusuka kithi.
Bona izithombe ezengeziwe kokuthi (OKUQUKETHWE OKUSENSITIVE KUFIHLIWE), 'La Broustelyre'.
IZILWANE!!! Qaphela ukuthi sinenja namakati angu-2. Inja, i-Doggy isendaweni yethu yengadi futhi ayikwazi ukuhamba, imithetho eqinile mayelana nezinja ezivalelwe lapha, ngakho-ke nina enisaba izinja ayikwazi ukuphuma (kodwa empeleni ithanda ukuba nabantu ngeshwa layo. !)
4.69 out of 5 stars from 341 reviews
4.69 · 341 okushiwo abanye
I-Miniscule village authentique phakathi kwezivini ze-bordeaux.
Ngikhona endaweni, ngitholakala lapho ungidinga, kodwa ngobuhlakani ngangokunokwenzeka! Ngiyathanda ukusebenzelana nezivakashi zami uma kuyilokho ezikufunayo, kodwa uma zincamela ubumfihlo obuningi engilungele, angisoze ngagxambukela.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bellefond namaphethelo